Madaxweyne Farmaajo: Waligiis wuu soconayaa dagaalka Al-Shabaab haddaan wadajir loola dagaalamin – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo: Waligiis wuu soconayaa dagaalka Al-Shabaab haddaan wadajir loola dagaalamin
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa, isaga oo Masjid ku yaala Madaxtooyada Soomaaliya kula hadlayey dad ay ka mid ahaayeen Xildhibaanno shalay, waxa uu sheegay in haddii aysan shacabku taageerin hawlgalada ciidanka uu dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab socon doono waligiis. “Inta ay naga laayeen dagaal noogama laayeen” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Hadal u muuqda inuu jawaab u yahay dhaleeceynta ka dhanka ah Dowladdiisa ee ah in muddadii uu Madaxweynaha ka ahaa dalka aysan xukuumaddiisu hal marna weerarin Al-Shabaab ayuu Madaxweyne Farmaajo u jeediyey dadkii ku soo tukuday Salaaddii Jimcaha masjidkaas, oo lagu magacaabo Masjiddu Shuhaddaa.
“Ciidamadeynu waa hawlgaleen” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo. “Dhawr bar ayey ka qabteen cadawga argagixisada ah” ayuu hadalkiisa raaciyey, isaga oo sheegaya in ay goobahaas ahaayeen barihii ay Al-Shabaab uga soo gudbi jireen qaraxyada ay ka geystaan Muqdisho.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay og yihiin in ay jiraan dad banaanka Soomaaliya ka soo taageera Al-Shabaab, oo sida uu sheegay Soomaalida neceb. “Waan ogahay in dibadaha, dad aan Soomaali jecleyn oo shisheeye ah ay wax siiyaan (Al-Shabaab)” ayuu yiri Farmaajo.
Madaxweynaha, oo ka jawaabaya su’aasha ah sababta ay Al-Shabaab inta badan u beegsadaan Muqdisho oo kaliya, ayaa yiri “Xamar waxay u qarxinayaan in la yiraahdo meeshaas dowlad kama jirto”. Waxaana, saasdaraadeed, uu Madaxweyne Farmaajo dalbaday in ay Shacabku ku biiraan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxa uu ku celceliyey in sugista amaanka ay tahay “Hawl Wadareed”, taas oo uu sheegay in looga feker duwanaan karo, waxa uuna tilmaamay inay noloshu mugdi sii geli doonto haddii uu xaal sii ahaado siduu hadda yahay.“Nabad-gelyadu qof gaar ah malaha, qof gaarana nabad-gelyadu uma adeegto” ayuu yiri Farmaajo. “Hadeynaan si wadajir ah uga hortagin dagaalku waa iska sii socon” ayuu raaciyey hadalkiisa.
Intii uu qudbaddaas jeedinayey kaamiradu qabatay qaar ka mid ah Xildhibaannada oo dhego-nugul ku dhageysanaya hadalka Madaxweynaha, taas oo u muuqata in ay hordhac u sii ahayd Kulanka Golaha Shacabka ee maanta oo looga hadli doono arrinta amniga dalka, gaar ahaan tan Muqdisho, oo ay todobaadyadii tagay ka dhaceen qaraxyo silsilado ah.
Kulanka Golaha Shacabka oo furmay iyadoo ay Wasiirka Amniga iyo Taliyayaasha Ciidanka joogaan